Home Wararka Shiikh Soomoow oo xabsiga la dhigi doono iyo Odayaasha Abgaal oo lasii...
Shiikh Soomoow oo xabsiga la dhigi doono iyo Odayaasha Abgaal oo lasii laaluushay si aysan uga hadlin (Aqriso)
Sida aan idinkugu soo baahinay wararkeeynii hore waxaa xil ka qaadis lagu sameeyay Axmed Cali Daahir Xeer Ilaaliyaha Qaranka ka dib markii uu diiday in uu jaro amar ah in lasoo xiro Shiikh Soomoow oo dhawaan kiciyay Xasarad lagu qalqal geliyay shiikh Umal oo damacsanaa in uu muqdisho ku qabto Muxaadaro.
Muqdisho Online ayaa loo xaqiijiyay in maalmaha soo socda la filaayo in xabsiga la dhigo Shiikh Soomoow si loo qanciyo dad badan oo uu ka mid yahay Shiikh Maxamed Cabdi Umal oo loo diiday in uu Muxaadaro ku qabto Stadium Konis.
Shiikh Bashir salaad oo ka mida hogaanka sare ee Urur diimeedka Ictismaan ayaa qudbo uu shalay ka aqriyay xafladii soo dhawaynta ay dowlada u smaeeysay Shiikh Umul ka sheegay in shaqsi iyo koox aan fahan fiican ka lahayn diinta islaamka ay diinta la carareen isaga oo taa ula jeeday culumada Ahlu Sunna. Shiikha ayaa sheegay in laga hortago in ficil noocaan oo kale ah uu markale Muqadishu ka dhaco, hadalkaas ayaa macnaheedu ahaa in talaabo laga qaado Shiikh Soomoow.
Shiiikh Soomoow ayaa waxaa uu ka mid yahay Culimada Soomaaliyeed kuwooda Dariiqa Suufida,waxaana uu leeyahay awood gudbineed sida la aaminsan yahay.
Dhanka kale waxaa Muqdisho Online loo xaqiijiyay in lasii laaluushay Odayaasha dhaqanka Beesha uu ka dhacay Soomoow ee Abgaal si aysan uga hadlin xarigiisa hadii xabsiga loo dhaadhiciyo.
Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ay arrinkaan kala kulmi doontaa culeeys wayn maadaama ay Muqdisho saameeyn ku leeyihiin Dariiqada Suufida oo uu qeeyb ka yahay shiiikh Soomoow.
Villa Soomaaliya Gaar ahaan Xafiiska Madaxwaynaha iyo Fahad Yasin ayaa qorshaha lagu soo xiraayo Shiikh Soomoow gadaal ka riixaayo iyagoo si aad ah uga careeysan in la baajiyo Muxaadardii ay soo qabanqaabiyeen ee laga hor istaagay Shiikh Maxamed Cabdi Umal.
Xogta aan helnay ayaa muujineeysa in ay ku sheekeeysteen kooxda rabto in la xiro Soomoow”Abgaal u doodaya hadii la xiro ma jiro sababtoo dowlada ayaa qancisay beesha Abgaal”.
Kulankii shalay loo sameeyay Shiikh Umul ayaa waxa la keenay dhamaan hogaanka beesha Abgaal oo u horeeyo Ugaaska beesha Abgaal Maxamuud Cali Ugaas iyo haweenka Abgaal si ay raali galin uga bixiyaan baaqashada muxaadaradii Shiikh Umul. Xaflada oo ay ku baxda lacagta kor u dhaafayso $17,000 ayaa waxaa laga bixiyay qasnada Gobolka Banaadir. Gudoomiye Cumar Finish ayaana lagu qasbay in uu raali galin siiyo shiikha.
Alsunna ayaa sheegtay in hadii la isku dayo in la xiro Shiikh Soomoow, in Muqadishu dagaal ka dhici doono.
Dhanka kale waxgaradka Abgaal ayaa sheegay in ayan la qabin raali galinta beenta ah oo ay bixiyeen waxa ay ku sheegeen “shaqsiyaad sheegtay in ay ku hadlayaan magaca Abgaal”